Raha mahatsiaro voafetra amin'ny Google Analytics ianao, piwik mety ho safidy tsara hafa Fiarahamonina Piwik loharanom-baovao misokatra ny fanontana Analytics fitaovana izay misy fanavaozana tsy tapaka sy famoahana vaovao maimaim-poana. Piwik PRO On-Premises misy karazana fampiasa premium fanampiny sy serivisy. Piwik PRO dia manolotra a cloud solution (izay mbola fanananao ny angona) raha tsy tianao ny hampiantrano azy ao anatiny. Piwik manana feno fampitahana ny vahaolana tsirairay amin'ny tranokalan'izy ireo.
Piwik koa dia namoaka infographic miaraka amin'ny tombontsoa rehetra atolotry ny Google Analytics. Marina fa sary mitanila ity. Google Analytics dia manome tokoa Google Analytics 360 ho an'ny mpanjifa orinasa. Ary tsy tokony handeha tsy hilazana fa manana tombony amin'ny fidirana amin'ny Webmaster sy Adwords Google izay tsy homen'ny mpamatsy hafa velively.